ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံကို ငွေစက္ကူတွင် ရိုက်နှိပ်ရန် လူငယ်အင်အားစုများ လိုလားနေ | ဧရာဝတီ
ထက်နိုင်ဇော်| February 16, 2013 | Hits:19,412
| | ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံ ရိုက်နှိပ်ထားသည့် ငွေစက္ကူအဟောင်းများကို ရန်ကုန်မြို့ ဗိုလ်ချုပ်ဈေး ရှေ့တွင် ရောင်းချနေစဉ် (ဓာတ်ပုံ – (ဂျေပိုင် / ဧရာဝတီ)
“ကျနော်တို့ စံပြခေါင်းဆောင် က ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပဲ၊ သူ့ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍကို အသိအမှတ်ပြုပေးပါ။ သူက မစားဘဲ စွန့်ခဲ့တဲ့ ခေါင်းဆောင်ပါ။ အခုခေတ်မှာ မစွန့်ဘဲစားတဲ့သူတွေ အများကြီးပဲ” ဟု ရန်ကုန် ပြည်သူ့အကျိုးဆောင် ကွန်ရက်မှ ကိုအောင်စိုး က ပြောသည်။
ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၃ ရက် နေ့တွင် ကျရောက်သော ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ ၉၈ နှစ်မြောက် မွေးနေ့ အခမ်းအနားကို ရန်ကုန်မြို့ အင်းယားကန်ပေါင်တွင် ထိုနေ့ညနေ ၄ နာရီက ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ဗကသများ အဖွဲ့ချုပ်၊ ရန်ကုန် ပြည်သူ့ အကျိုးဆောင် ကွန်ရက်၊ Generation Wave၊ Generation Youth နှင့် ရန်ကုန်မြို့အခြေစိုက် လူငယ်အင်အားစု ၁၀၀ ခန့် တက်ရောက်ခဲ့ရာ ယင်းအခမ်းအနားတွင် ၎င်းက အထက်ပါအတိုင်း ပြောဆိုလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
၉၈ နှစ်မြောက် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း မွေးနေ့ အခမ်းအနား တွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ ရုပ်ပုံလွှာကို ငွေစက္ကူနှင့် တံဆိပ်ခေါင်း များပေါ်တွင် ပြန်လည် သုံးစွဲနိုင်ရန် တောင်းဆိုသော လက်မှတ်များ ရေးထိုးခဲ့ကြပြီး ရရှိသော လက်မှတ်များနှင့် တခြား နေရာများမှ စုဆောင်းရရှိထားသော လက်မှတ် ၅၀၀ ကျော် ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ထံ တဆင့် ပေးအပ်နိုင်ရန်အတွက် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ရုံးသို့ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၄ ရက်နေ့တွင် သွားရောက် ပို့ဆောင်ခဲ့ကြောင်း Generation Youth မှ ကိုနေထွဋ်ပိုင်က ပြောသည်။
“ပြဿနာ အခက်အခဲရှိရင် သူ့ဆီကို အရင်လာပြီး အကူအညီတောင်းပါ ဆိုပြီးတော့ ပြည်ထောင်စုနေ့က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောထားတယ်။ အဲဒါကြောင့် သူ့ဆီကို အရင်သွားပြီး အသိပေးတာ” ဟု သူက ပြောသည်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ရုပ်ပုံပါ ငွေစက္ကူများသည် ၁၉၈၈ ခုနှစ် နောက်ပိုင်း ခြင်္သေ့ရုပ် ငွေစက္ကူများ ပေါ်ပေါက်လာပြီး နောက်တွင် တဖြည်းဖြည်း ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ရကြောင်း ကမ္ဘောဇဘဏ် ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသန်းလွင်က ရှင်းပြသည်။
နိုင်ငံတကာမှ ငွေစက္ကူများတွင် တိုင်းပြည် တည်ထောင်ခဲ့သော သူများကို အမှတ်တရရှိစေရန် ထည့်သွင်းဖော်ပြကြပြီး အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံများတွင် ဂန္ဒီ၊ နေရူး၊ ဂျင်းနား၊ မော်စီတုန်း စသည့် ခေါင်းဆောင်ရုပ်ပုံများကို အသုံးပြုကြကြောင်း၊ အချို့နိုင်ငံများတွင် ခေတ်ကာလနှင့် လျော်ညီသောရုပ်ပုံများကို အသုံးပြုကြကြောင်း ဦးသန်းလွင်က ရှင်းပြသည်။
“အနေအထိုင် ရိုးစင်းတာနဲ့ နိုင်ငံနဲ့ ပတ်သက်လို့ အသက်စွန့်လွှတ် အနစ်နာခံပြီးတော့ အဲဒီခေတ်ရဲ့ လိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့ လွတ်လပ်ရေးကို ရူးသွပ်တာမျိုးပေါ့။ ကျနော်တို့ နိုင်ငံမှာလည်း အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးမှာ ဘယ်လောက် ရူးသွပ်လဲ ဆိုတာ နိုင်ငံနဲ့ချီပြီးတော့ ရူးသွပ်မှုတွေ မွေးမြူကြရမှာပါ” ဟု သူက ထပ်ပြောသည်။
“သူ အသက်ရှင် နေထိုင်စဉ် ကာလအတွင်းမှာ တိုင်းပြည်အကျိုးကို အများကြီး လုပ်ခဲ့တဲ့အတွက် လေးစားမိပါတယ်” ဟု အင်းလျားကန်ပေါင် အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်လာသော စမ်းချောင်းမြို့နယ်မှ အသက် ၁၅ နှစ်အရွယ် မောင်အောင်မိုးသူ က ပြောသည်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း လုပ်ကြံခံရမှု၏ နောက်ကွယ်မှ ပဟေဠိ ကွင်းဆက်များ (နိဂုံး)ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း လုပ်ကြံခံရမှု၏ နောက်ကွယ်မှ ပဟေဠိ ကွင်းဆက်များ (အပိုင်း - ၅)အာဇာနည်နေ့ အခမ်းအနားများ လူထုပါဝင်မှုဖြင့် စည်ကားစွာ ပြန်လည် ကျင်းပခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း လုပ်ကြံခံရမှု၏ နောက်ကွယ်မှ ပဟေဠိ ကွင်းဆက်များ (အပိုင်း - ၄)ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း လုပ်ကြံခံရမှု၏ နောက်ကွယ်မှ ပဟေဠိ ကွင်းဆက်များ (အပိုင်း - ၃)
ahnaingmae February 16, 2013 - 11:34 am သူများနိုင်ငံငွေက သူရဲကောင်းပုံတွေပါတယ်.. မြန်မာနိုင်ငံဘဲ ဆင်ဖြူ စိတ်ပျက်ဖို့ကောင်းတယ်..။ တိရိတ္ဆာန် က တိရတ္ဆာန်ကို ကိုးကွယ်တော့ တိရိတ္ဆာန်ပုံတွေဘဲ ဖြစ်ကုန်နေပီ..။
Reply ဗမာ February 16, 2013 - 7:10 pm အဲဒီကိစ္စကို ထောက်ခံပါတယ်ဗျာ။တမျိုးသားလုံးချစ်တဲ့ နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့အတွက် လူထုလှုပ်ရှားမှုအသွင်နဲ့လည်း ဆန္ဒထုတ်ဖော်သင့်ကြောင်းပါ။ လွှတ်တော်ထဲမှာလည်းအခုထိဆွေးနွေးသံ မကြားရသေးဘူးနော်။
Reply Ja bu February 16, 2013 - 9:01 pm နိုင်ငံတော်လူကြီးတွေက တိရိစာန်စိန်မကုန်သေးသရွှေ့တော့ ဆင်တို့၊ ခြင်သေ့တို့၊ ကြားတို့ ခွေးတို့ စသည့်ပုံတွေ သုံးဦးမှာဘဲ
Reply true talker February 16, 2013 - 11:15 pm Quite lucky that ,during the regime’s time, the Generals,did not mentioned with Nay Win & Than Shwe,picture. May be they wants to do so….
Reply ရာဇာ February 16, 2013 - 11:21 pm ဗိုလ်ချူပ်(ဗိုလ်ချူပ်အောင်ဆန်း)ကို ချစ်ကြတဲ့ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံးမျှော် လင့်တောင့်တနေကြတဲ့အရာပါ။ မြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ယောက်အနေနဲ့လည်း မြန်မာ့လွတ်
တဲ့တပ်မတော်ရဲ့ဖခင်းကြီးလည်းဖြစ်၊ မြန်မာပြည်တွင်မက ကမ္ဘာကပါချစ်ခင်လေးစားရတဲ့
ကျက်သရေရှိလှတဲ့၊ အတုယူဖွယ်ရာစံနမူနာယူထိုက်တဲ့ ဗိုလ်ချူပ်(ဗိုလ်ချူပ်အောင်ဆန်း) ရဲ့
သွားတဲ့ ပြည်သူတွေချစ်တဲ့ တိုင်းပြည်ရဲ့ဖခင်ကြီးကိုမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ ငွေစက္ကူ
တွေအပေါ်မှာ ဗိုလ်ချူပ်(ဗိုလ်ချူပ်အောင်ဆန်း) ဓါတ်ပုံတွေ ရိုက်နှိပ်ပြီးလောက်တော့ ဖော်ပြဂုဏ်ပြုသင့်ပါတယ်။
Reply Shwe Yoe February 17, 2013 - 7:27 am Why don’t we have the photo of Than Shwe hanged upside down.
Reply ပုပ်ပါးသားလေးမင်းမင်း February 17, 2013 - 10:43 am ပိုက်ဆံငွေစက္ကူတိုင်းကို ဗိုလ်ချုပ်ပုံဖြစ်စေလိုပါတယ်။ဒီလိုမျိုးဖြစ်သင့်တာလည်း ကြာပါပြီ။
Reply ညီတေဇ February 17, 2013 - 12:06 pm တခြားနိုင်ငံမှာ တိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်ပုံတွေ ရိုက်တယ် ဒီမှာက ခြသေ့င်္ ကြီးစိုးတော့ တိရိစ္ဆာန်
Reply yu February 17, 2013 - 2:30 pm I agree to ahnaingmae.
Reply Ko Khine February 17, 2013 - 8:34 pm မောင်နေ၀င်း အပါဗိုလ်သန်းရွေအဆုံး သူတို့ အာဏာစက်တွေမေးမြိမ်သွားမှာဆိုတော့ အများ ပြည်သူကြည်ညိုတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း အားပုံ တမင်ရည်ရွယ်ပြီးမထည့်တာ အားလုံးအသိပါ ။ ဒါပေမဲ့ အများပြည်သူတွေရဲ့ နလုံးသား ထဲမှာ မေးမြိမ်မသွားပဲ ပိုပြီး ဆွဲလန်းစေတာပဲ။
နောက်တခုက ဗိုလ်သန်းရွှေကြီးက မြန်မာငွေစက္ထူပေါ်တွင် ဗိုလ်ချုပ်ပုံမထည့်ချင်တဲ့အကြောင်းရင်းနှစ်ခုရှိတယ်။
၁ ။ သူ့ ပုံကြီး ထည့်ချှင်ပေမဲ့ မသင့်တော်မှန်းသိတာတပိုင်း သူ့ ပုံထည့်တာနဲ့ တပြိုင်တည်း မြန်မာ့ငွေကြေးတန်ဖိုး စာရွတ်အဆင့်သာသာရောက်သွားမှာဖြစ်သည့်အတွက် မကောင်းတတ်လို့ မ ထည့် တာပါ။
၂ ။ ဗိုလ်ချုပ်ပုံထည့်လိုက်ရင် အမေစုကြီးအားပေးထောက်ခံရာ ရောက်သွားမည့်အတွက် တပိုင်း၊ သူ့ ရဲ့ ပေါ်ပြူ လာမှူကြဆင်းသွားမှာတွေ ကြောက်ပြီး တမင် ရည်ရွယ်ချက်ကြီးကြီးနှင့် မထည့်တာဖြစ်တယ် ။
အမှန်ဆို ၊ အမေစု နဲ့မူဝါဒ၊ အယူဝါဒ ချင်းမတူတာတွေ ခဏဘေးချိတ်ပြီး နိုင်ငံခေါင်းဆောင်းကောင်း ဟန်ဆောင်ကာ ကြိတ်မှတ်ပြီး သဘောထားကြီးကြီးနဲ့ဗိုလ်ချုပ်ပုံထည့်လိုက်ရင် ငရဲပြည်မှာ သူခံရမည့် ၀န်တွေ တ၀တ်လောက်သက်တာပြီး အများပြည်သူရှေ့ မှောက်မှာ လူစွမ်းကောင်းကြီးဖြစ်ကာ တနေ့ နေ့ တချိန် ချိန်မှာ သူ့ ရဲ့ ပုံတော်ကြီးအား ပလှပေ မဲ့ သဘောထားကြီးတဲ့ အနာဂါတ်ခေါင်းဆောင်းများမှ မြန်မာ့ငွေစက္တူပေါ်တွေ ရိုက်နှက်မှာဖြစ်တယ် ၊ ဒါပေမဲ့ အခုတော့ မရတော့ဘူး။
Reply robert February 18, 2013 - 9:17 am တိရိဆန်ပုံပါတဲံ့နိုင်ငံကတိရိဆန်အုပ်ချုပ်တာ လူပုံပါတဲ့နိုင်ငံကလူအုပ်ချုပ်တာ
Reply Salai Lian February 18, 2013 - 1:09 pm After Ne Win messed it up, Burmese currencies becomeajoke. Printing 45 Note and 90 Note made Burmaalaughing matter. People around the world are proud of their currencies but we the Burmese people have nothing to be proud of. If public poll is taken today, General Aung San’s picture will be their only choice to put on our currencies.
Reply kyaw naing linn February 19, 2013 - 12:06 pm အင်း…နိုင်ငံတကာမှာကတော့ သူတို့တွေလေးစားချစ်ခင်ရတဲ့ သူတွေကိုရည်ညွှန်းပြီ ပိုက်ဆံမှာ ရိုက်နှိပ်ကိုးကွယ်ကြတယ် မြန်မာနိုင်ငံကေ လးစားစရာကောင်းတဲ့သူတွေက ဘယ်သူတွေများလဲ ?